ko htike's prosaic collection: August 2009
လတ်ဆတ်တဲ့ အိမ်မက်မရှိတဲ့ ….. တိုင်းပြည်…..၊
ဦးတည်ရာ လမ်းမရှိဘဲ… လျှောက်နေမိတဲ့…. ခြေထောက်တို့…..၊
ကျောင်းတက်ခေါင်းလောင်း ရှိရာဆီ….. ပြေးကြ…..။
အမှန်တရားအတွက်…. အသက်ကို စတေးရဲသူတို့….
အတ္တကို ဇီဝိန်ချုပ်ပြီး…. နေနေကြ…..
ငွေအတွက် အတ္တကို သူတောင်းစား လုပ်နေသူများ….
ကိုယ့်ကျောပေါ်ကျကျလာတဲ့…… နှင်တံကို …ကိုင်ပြီး….
အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး…. တံဆိပ် ကပ်ကြ….။
သခင်က ပလ္လင်မှာ ထိုင်ရင်း…. အာဏာ နူနာစွဲနေ…..
နောက်ကမယားက…. အ၀ီဇိ မျိုးဆက်ကို….
ပေါ်လီယာနာ ဂိုက်လည်း ဖမ်းထားသေးတယ်…..။
နာဂစ်လည်း…. တွေ့ပြီးပြီ…. NGO….. တွေလည်း မွှေပြီးပြီ……
မြိုချမယ့်… ဂူဝတွေလည်း…. ဆောက်ပြီးပြီ…။
အနာဂတ်ကို အံစာခေါက်ရင်း…. ပြက္ခဒိန် တွေ ဆွဲစုတ်…..။
မှားပါ များတဲ့ …. အမှားဟာ…
လျှောက်မိမှတော့…. ပြဒါးတစ်လမ်း…. သံ တစ်လမ်း….
ဘယ်ဘုံဘ၀ ရောက်ရောက်…… “သစ္စာ” ဆိုတဲ့ ရန်ကြွေးရှိရင်….
Posted by ကိုထိုက် at 00:01 1 comments
We support sanctions as long as SPDC keep our leaders in Prison
No Matter what senator Jim webb talked about the sanctions, that Daw Aung San Suu Kyi did not say to him, We support the sanctions until SPDC release our leaders out of their prison.
အမေရိကန် လွှတ်တော် အမတ် ဂျင်မ်ဝက်ဘ် က မြန်မာပြည်အပေါ် စီးပွားရေး အရ အရေးယူမှု အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ ပြောခဲ့သည်ဟု နားလည်မှုလွဲကာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို လွဲမှား၍ ပြောစေကာမူ၊ နိုင်ငံတကာ၏ စီးပွားရေးအရ အရေးယူမှုကို ကျွန်တော်တို့၏ ခေါင်းဆောင်များ နအဖ၏ အကျဉ်းထောင်များအတွင်းမှ မလွတ်မြောက်မချင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးက စီးပွားရေးအရ အရေးယူမှုများကို ထောက်ခံပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 23:140comments
ဘယ်မှာလဲ လောကပါလ တရား
ပြောစရာ စကားလုံးကို ရှာလို့ မရအောင်ကို နာကြည်းမိပါတယ်။
နောက်ဆုံး အဆုံးသတ်မှာတော့ အိမ်ထဲမှာ ၁၄ နှစ်ကျော် ပိတ်ခံထားရပြီး ဘာမှ ပြဿနာ မရှာတဲ့ အသက် (၆၀) ကျော် အမျိုးသမီးက နောက်ထပ် ၁၈ လ ထပ်မံ အပိတ်ခံရပြီးတော့၊ အဲဒီ ပြဿနာတွေက မဖြစ်၊ ဖြစ်အောင် သူတပါးအိမ်ထဲ ကျူးကျော် ဝင်ရောက်ပြီး အမှုဖန်တီးတဲ့ အရူးကိုတော့ အမိန်ချပြီး (၅) ရက်အကြာ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြန်လွှတ်မယ်တဲ့။
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ဟာ အာဏာရှုး အကြမ်းဖက်သမားတွေ လက်ထဲမှာ အလုံးစုံ ပျက်သုဉ်းသွားနေပြီ ဆိုတာ သိသာလွန်းအောင်ကို ရင်နင့်စရာ ခံစားနေရပါပြီ။
comment ထဲက darli ရဲ့ စကားသံကိုလည်း တခါတည်း ပြန်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
American who mess up is free now and our leader has to be 18 more months house arrest.
Huge Foreign Support!!!
Posted by ကိုထိုက် at 16:483comments
(CNN) -- U.S. Sen. Jim Webb obtained the release Saturday of American John Yettaw, who had been sentenced to seven years of hard labor in Myanmar for visiting detained pro-democracy leader Aung San Suu Kyi.
Webb will accompany Yettaw to Bangkok, Thailand, Sunday onamilitary aircraft, his office said.
Webb also met for about 40 minutes Saturday with Suu Kyi,awitness said. It was not known what they discussed.
Webb,aVirginia Democrat, is the first member of Congress to visit Myanmar in more thanadecade. Though he is not in the country on behalf of the State Department, his trip may indicateashift in America's hard-line stance against the reclusive country.
Webb is chairman of the East Asia and Pacific Affairs subcommittee of the Senate Foreign Relations Committee.
Before meeting Suu Kyi on Saturday, Webb met with Myanmar's top official, junta leader Senior Gen. Than Shwe.
Webb's visit -- part ofatwo-week, five-nation tour of Asia -- comes just days after the conviction of Nobel Peace Prize laureate Suu Kyi.
She was sentenced on Tuesday to 18 months of house arrest stemming fromaMay incident in which Yettaw swam two miles uninvited to her home, violating the terms of her house arrest.
Yettaw had been sentenced to seven years of hard labor.
A Myanmar court initially sentenced Suu Kyi to three years in prison for violating her house arrest, but Than Shwe commuted it to the year andahalf of house arrest.
Yettaw,a53-year-old former military serviceman from Falcon, Missouri, stayed in Suu Kyi's home for two days.
He testified in court that God had sent him to Myanmar to protect the opposition leader because he dreamed thataterrorist group would assassinate her. He was convicted of violating immigration laws, municipal laws and Suu Kyi's house arrest terms.
The United Nations Security Council on Thursday expressed "serious concern" over Suu Kyi's conviction and its political impact, and urged the government to "create the necessary conditions foragenuine dialogue" with the pro-democracy leader.
Also Thursday, the European Union adopted "a new set of targeted measures" against Myanmar in reaction to the verdict against Suu Kyi. Under the measures, members of the Myanmar judiciary responsible for Suu Kyi's conviction will be added toalist of people and entities subject toatravel ban and assets freeze.
Suu Kyi has spent 14 of the past 20 years in one form of confinement or another -- most recently under house arrest inacrumbling lakeside home. The country's regime rarely allows her visitors, and foreigners are not allowed overnight stays in local households without government permission. Suu Kyi, who won the Nobel Peace Prize in 1991, has said she doesn't know Yettaw, did not know of his plans and denied any wrongdoing. She told the court she did not report the intrusion because she did not want Yettaw or anyone else to get in trouble.
Posted by ကိုထိုက် at 15:134comments
Posted by ကိုထိုက် at 10:434comments
We want Fair Elections!!!
London က time သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ကာတွန်းလေး တစ်ခုကို ပြန်လည် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 01:123comments
(သရုပ်ဖေါ် ပန်းချီထိန်လင်း -www.kaungkin.com မှ ရယူထားပါသည်။)
ဒါဟာ…. ဇာမဏီ မစစ်လို့ပဲ….။
သက္ကရာဇ်ကို ရိုက်ချိုးပြီး….. အမှန်တရားရဲ့ ခြေတော်ရင်းမှာ….
သစ္စာရှင်အစစ် ရှိ… မရှိ ဆိုတာ…
တစ်ပြည်လုံးနဲ့ တစ်ယောက် အချိုးကြသလား…..
လူတိုင်းကို ရင်ဖွင့် ပြထားတယ်…။
တစ်ယောက်တည်း… ကမ္ဘာမကြေကို…. ကြိတ်ဆိုနေတာမဟုတ်ဘူး….
ဒီတိုင်းပြည်အနာဂါတ် အတွက်…. တစ်လောကလုံးသိအောင်
အာဇာနည် မျိုးဆက် ပီသကြောင်းကို….
သူမ…. အောင်ဆန်း ဂုဏ်ကို ဖော်ရင်း….
ဒီနေ့ ခေတ် ဗမာ့တပ်မတော်ကြီး တစ်ခုလုံးဟာ…..
“ထမိန်” တစ်တည် ကို ကြောက်လန့်နေရတယ်…..။
သစ္စာတရားရဲ့ ”မာန်”ကို ဘယ်သူမှ
အ၀ီစိကို သွားဖို့ …. တူးနေတဲ့ ဂူတွေ….
Posted by ကိုထိုက် at 23:023comments
ကြိုတင် လုပ်ကြံ အမိန်ချမှုနှင့် တရားဥပဒေစနစ် နိုင်ငံတွင်း မရှိကြောင်း သက်သေတစ်ခု
ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နအဖကသူတို့ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်နေချိန်မှာ ပြည်သူနဲ့ ထိစပ်မှု မရှိအောင် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဆိုပြီး ၁၈ လ( တစ်နှစ်ခွဲ) ထပ် ဖမ်းလိုက်တာပါပဲ။
နအဖ သတင်းမှာ ကြေငြာသလို အခုမှ ဒီအမိန့်ချပြီး အားလုံးကို အသိပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နဂိုမူလကတည်းက ကြိုရေးထားတဲ့ စာ နှစ်စောင်ထဲက သူတို့ အတွက် ဖိအားတွေ အရမ်းများလို့ အပြစ်ဒဏ် နည်းနည်းပျော့တဲ့ ဒုတိယ စာကို ထုတ်သုံးလိုက်တာပါပဲ။
တရားရုံးတင်၊ အမှုစစ်ဆေးနေတယ် ဆိုတာတွေကတော့ လူယုတ်မာတွေက လူကြားကောင်းအောင် လျှောက်လုပ်ပြီး အချိန်ဆွဲပြနေတာ သက်သက်ပါပဲ။
အဆိုပါ စာနှစ်စောင် ကြိုပြီး စီစဉ်ထားကြောင်း ကျွန်တော့်ရဲ့ မိတ်ဆွေ "သူရဲကောင်း" ပေးပို့ထားခဲ့တဲ့ သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လို ဘယ်ပုံနဲ့ အမိန့်က အထက်အောက် ပျံနှံ့သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူတွေက တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ပေးရသလဲ ဆိုတာ သတိထားမိနိုင်အောင် ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ "သူရဲကောင်း" ပေးပို့ထားခဲ့တဲ့ သတင်းကို အောက်ပါ လင့် မှာ ပြန်လည် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Posted by ကိုထိုက် at 10:283comments
လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား တပ်ဖွဲ့များ၏ ရှေ့ရေးနှင့် နအဖ၏ ကောက်ကျစ်မှု
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၈) ရက်နေ့မှာ ကချင်ပြည်နယ် လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ (KIO) နဲ့ နအဖရဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှု ဗိုလ်ချုပ် စိုးဝင်းတို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ... နအဖ ဘက်ကလည်း သူတို့ လိုချင်သော အချက်များကို ဆွေးနွေးသွားသလို၊ KIO ဘက်ကလည်း သူတို့ သဘောမတူသည်များကို ငြင်းခဲ့ပြီး အသစ်တောင်းဆိုသည်များကိုလည်း တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ KIO က နအဖဘက်က လိုချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ သဘော မတူဘဲ မိမိတို့ လိုချင်တဲ့ အချက်တွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ ထင်လိုက်ရပါတယ်။
တကယ်တန်း သေသေချာချာ ပြန်တွေးကြည့်တဲ့ အခါ KIO ဘက်က ဆွေးနွေးပွဲမှာ သဘောတရားရေးရာအရ အရေးနိမ့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို တွေ့ရပါတယ်။
နအဖ ဘက်က လာပြီးတော့ ညှိနှိုင်းတဲ့ အချက်တွေထဲက အဓိက အချက်တွေကတော့...
KIO အနေနဲ့ ပါတီဖွဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့
KIO ကို နယ်ခြားစောင့် တပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းပေးဖို့
KIO ဘက်က အဓိက တောင်းဆိုတဲ့ အချက်တွေကတော့
နယ်ခြားစောင့်တပ် အစား၊ ကချင်ဒေသ လုံခြုံရေးတပ် အဖြစ် ဖွဲ့စည်းဖို့
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကတိ လွယ်လွယ်ပေးပြီး၊ ကတိ မတည်ဆုံး အဖွဲ့အစည်းကို ပြပါဆိုရင် နအဖကို လက်ညိုးထိုး လွဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ (၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် အတည်ပြုရေး ကိစ္စက "စ" လို့ အခြားသော ကိစ္စတော်တော်များများမှာ မိမိကတိ စကားကို တလုံးမှ တန်ဖိုးမထားတတ်တဲ့ ကလိန်ခြုံတွေ ဆိုတာ အားလုံး အသိပါ။)
ဒီနေရာမှာ KIO က တောင်းဆိုထားတဲ့ အာဏာသုံးရပ်မှာ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဖို့ ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လို ပုံစံမျိုးနဲ့ တောင်းဆိုခဲ့သလည်း ဆိုတာ အရေးကြီးပါတယ်။ ပါးစပ်ကတိနဲ့ အာဏာသုံးရပ်မှာ တိုက်ရိုက်ပါဝင်ဖို့ ကတိပြုပါတယ်လို့ပြောမယ့် ကတိစကားကို ဘယ်လို တာဝန်ယူပြီး ဘယ်လို ဖေါ်ဆောင်ပေးမှာလည်း ဆိုတာကတော့ နအဖနဲ့ KIO တို့ ဆွေးနွေးပွဲရဲ့ အသက်ပါပဲ။
လက်နက်ကိုင် အကြမ်းဖက်သမား အဖွဲ့ (နအဖ) မှာက သူတို့ သေသေချာချာ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတာကြီး ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိ နအဖက ကတိပေးပါတယ် ပြော ...... ။
ပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ တိုက်တွန်း ..... ။
KIO က သဘောတူပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ .. နအဖရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ KIO က ကျသွားပြီလို့ ထင်မိပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အခြေခံ ဥပဒေ ဆိုတဲ့ ... ဥပဒေ တစ်ခုက အစိုးရအဖွဲ့လို့ ခေါ်လို့ ရရုံ ဖြစ်မယ့် နအဖ (ပုံပြောင်း) အဖွဲ့မှာ ရှိလာလို့ပါပဲ။
အာဏာ သုံးရပ်မှာ တိုက်ရိုက်ပါဖို့ ကိစ္စအတွက်ကတော့ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ပါတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ မညီဘူး၊ ဥပဒေနဲ့ ဆန့်ကျင်တယ် ဆိုပြီး လွယ်လွယ်လေးနဲ့ ပယ်ချပါလိမ့်မယ်။
ဒုတိယ အချက် ဖြစ်တဲ့ နယ်ခြားစောင့် တပ်အစား ကချင်ဒေသ လုံခြုံရေး တပ်အဖြစ်သာ လက်ခံမယ် ဆိုတာနဲ့၊ နအဖ စစ်တပ်က စစ်သားတွေကို ပါဝင်ခွင့် မပြုဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
နအဖရဲ့ အခြေခံ ဥပဒေမှာ အခန်း (၇) ပုဒ်မ (၃၃၈) မှာ နိုင်ငံတော် အတွင်းရှိ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း အားလုံးသည် တပ်မတော်၏ ကွပ်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိရမည်။ .. လို့ ရေးထားပါတယ်။
ဒီတော့ ဘယ်လို နာမည်နဲ့ပဲ KIO တပ်ကို အသွင်ပြောင်းပါစေ၊ အခြေခံ ဥပဒေအရ KIO ရဲ့ တပ်ဟာ နအဖ လက်အောင်ခံတပ် လုံးဝ ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီအချက်ဟာ KIO ရဲ့ ရှေ့ရေးနဲ့ ကချင်ဒေသတွင်းက ပြည်သူလူထုရဲ့ ရှေ့ရေးအတွက် စိုးရိမ်စရာ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
KIO က ပါတီဖွဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ပါတီနဲ့ တပ်ဆိုပြီး သီးခြားစီ ကွဲလာမယ့် အခြေအနေကိုလည်း မြင်နေရပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ၁၉၈၈ အသင်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ဥပဒေအရ ပါတီဦးဆောင်မှု အောက်မှာ လက်နက်ကိုင်တပ် ဖွဲ့စည်းခွင့် ပြုမထားပါဘူး။
ဒါဆို အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ပါတီဖွဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ ပါတီက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာ KIO တပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဒါဆို KIO အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ညီညွတ်မှု စတင်ပြိုလာမယ့် အရေး ဖြစ်လာလို့ နေပါပြီ။
တပ်မတော်ရဲ့ ကွက်ကဲမှု အောက်တွင် ရှိရမည်လို့ ဆိုထားတာကြောင့် ..... အဓိကကျတဲ့ တပ်ရပ်တည်ရေး ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို နအဖ တဖြစ်လဲ အစိုးရ အဖွဲ့ကို အားကိုးရမယ့် အခြေအနေဖြစ်လာတာကြောင့် ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ်ရဲ့ ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိ ရိုသေရတဲ့ နအဖ လက်ကိုင် တပ်တစ်ခု အလိုလို ဖြစ်သွားမယ့် အရေးကလည်း ရင်မအေးစရာပါပဲ။
အခု ဘယ်လိုပဲ ကတိတွေ ပေးပေး၊ နောင်ဖြစ်လာမယ့် နအဖ တဖြစ်လဲ အစိုးရအောက်မှာတော့ .... အခြေခံ ဥပဒေဆိုတဲ့ ဥပဒေစကားပြော .. ဥပဒေနဲ့ ကိုင်ပေါက်တာခံရပြီး ဘာမှ လှုပ်မရအောင် ဖြစ်လာမှာ သေချာလို့ နေပါတယ်။
အခြေခံ ဥပဒေကို နောင်တချိန်မှာ ပြင်လို့ရတာပဲလို့ ပြောစရာ ရှိလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြင်ဆင်ဖို့ ဆိုတာကတော့ အခြေခံ ဥပဒေကို သေချာ လေ့လာကြည့်ရင် ပြင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သိသာပါတယ်။ လုံးဝ ကို ပြင်လို့ မရတဲ့ အခြေခံဥပဒေပါပဲ။ (ဒီနေရာမှာ ဦးတည်ချက် လွဲသွားပြီး စာရှည်သွားမှာ စိုးလို့ ဘာကြောင့် လုံးဝ ပြင်လို့ မရတဲ့ အခြေခံ ဥပဒေလဲ ဆိုတဲ့ အသေးစိပ်အချက်အလက်ကို နောက် ဆောင်းပါးတွေမှ အလျင်းသင့်သလို ဖေါ်ပြပါမယ်။)
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ ကောက်ကျစ်တဲ့ နအဖနဲ့ လက်တွေ့ကျကျ ရင်ဆိုင်ပြီး အလုပ် လုပ်ရမယ် ဆိုရင်တော့ နအဖရဲ့ ပါးစပ်ကတိစကား ဆိုတာထက် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေကို ပြင်ဆင်ရေးစွဲပြီး သဘောတူမှသာ အနာဂတ် တိုးရင်းသားတွေရဲ့ ရှေ့ရေး လုံခြုံမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း ... တွေးမိ၊ လေ့လာမိသလောက် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကိုးကား ... ဦးအောင်ထူး၏ အခြေခံဥပဒေနဲ့ လူထု အခန်းကဏ္ဍ ဆောင်းပါး အမှတ် (၈၆)
Posted by ကိုထိုက် at 23:293comments
Posted by ကိုထိုက် at 22:147comments
အာဇာနည်တိုင်း သမိုင်း မသေ ... ဆိုသော မြိတ်မြို့မှ လူငယ်များ၏ ဆုတောင်းပွဲ
31. 7. 2009 ရက်နေ့မနက်ပိုင်း၊ မနက် (၇) ကျော်ခန့်တွင် မြိတ်မြို့ရှိ လူငယ်အဖွဲ့တွေဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲလေး တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။
မြိတ်မြို့ မနက်စောစော မိုးရေထဲတွင် မြိတ်မြို့ရှိ မျိုးချစ် လူငယ် တစ်စုမှ ပထမဦးဆုံး ပေါ်တော်မူစေတီတော်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဆုတောင်း ဝတ်ပြုပြီးနောက်၊ လေးကျွန်း ဆီမီး သိမ်တော်ကြီး စေတီတော်၊ ထိုမှတဆင့် နောက်လယ်ရပ် အောင်ချမ်းသာ ဘုရားများတွင် ဆုတောင်းကြခဲ့ကြပါသည်။
Posted by ကိုထိုက် at 22:003comments